Xarunta Wax Barashadu waxay ka bilaabatay Talada Wanaagsan ee Hill, Mankato, Minnesota, 1967 iyadoo laga jawaabayo baaqii Guddiga Waxbarashada ee Mareykanka ee ahaa in la sameeyo barnaamijyo akhris oo ka dhaca waddanka oo dhan. Walaasheed Mary Donald Miller ayaa codsatay in loo isticmaalo dhisme madhan si loo dhiso xarun daboola baahida ardayda iyadoo dhibcaha akhrisku hoos u dhacayaan. Waxaan ogahay dhibaatooyinka ay caruurtu leeyihiin akhriska waxaanan siin karaa caawimada ay u baahan yihiin, ayay tidhi Sr Mary Donald Miller.
Konton iyo toddobo carruur ah iyo lix qof oo waaweyn ayaa laga diiwaangeliyey Xarunta Akhriska sanadkii ugu horreeyey. Barnaamijyo gaar loo leeyahay oo ay la socdaan macallimiin akhriska shahaadada leh ayaa loo diyaariyey arday kasta oo jooga aagga Mankato si loogu bixiyo lacag magac ah Baahida loo qabo barashada maadooyinka dheeriga ah ayaa la ogaaday 1977 waxaana magaca loo badalay Xarunta Waxbarashada. Maanta macallimiin aqoon leh ayaa sii wadaya u adeegida carruurta K illaa fasalka 12aad. Markii ay korodhay tirada qaxootiga sannadihii la soo dhaafay, Xaruntu waxay u adeegtay tiro aad u tiro badan oo qaan-gaar ah oo Barteyaalka Luqadda Ingiriiska ah. Ardaydan waxay rabaan inay bartaan sida loola xiriiro Ingiriisiga, wax aqrinta, qorista, iyo barashada xisaabta loo baahan yahay si loogu guuleysto iskuulka, shaqooyin loo helo, loona dadaalo Horumarinta Guud ee Waxbarashada (GED). Dibloomada ayaa fure u ah fursadaha shaqo iyo fursadaha shaqo, horumarka shaqada, waxbarashada dugsiga sare kadib iyo abaalmarinta dhaqaale.
In ka badan konton sano oo ay shaqeyneysay, Xaruntu waxay laheyd toban agaasimeyaal SSND iyo macallimiin badan oo khibrad leh, Walaalo iyo xubno ka tirsan bulshada. In ka badan 3,000 oo arday ayaa la baro, sannad dugsiyeedka ama barnaamijka xagaa ee Xarunta Waxbarashada.
Hooyo Theresa Gerhardinger, oo ah aasaasaha Iskuullada Walaalaha Dugsiga ee Notre Dame, waxay u mahadcelin doontaa Ilaah iyada oo og in Walaasheed ay wali wax barayaan, u adeegayaan masaakiinta, isla markaana ay saameyn ku leeyihiin bulshada maanta, maxaa yeelay "Jacaylku wax walba wuu siiyaa, farxad!"
Akhriso si aad waxbadan uga barato taariikhda Xarunta Talo Bixinta Talada Wanaagsan
U dabaal degaya 50 sano oo waxbarasho ah Xarunta Talo Bixinta Talada Wanaagsan
Nolol La Xusuusto: Miller Waxay Aasaastay Xarunta Talo Bixinta Talada Wanaagsan